Madaxweynihii hore Xasan skekh oo mar kale eeda dalka iyo doorasho la’aanta dusha u saaray farmaajo.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynihii hore Xasan skekh oo mar kale eeda dalka iyo doorasho la’aanta...
Madaxweynihii hore ee Somaliya ahna Musharrax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah midowga musharraxiinta ayaa si kulul eeda dusha kaga tuuray madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo).
Xasan shekh ayaa ku tilmaamay farmaajo shaqsi ku fashilmay Hogaanka dalka oo waqtigiisa dhamaaday, waxa uuna sheegay in sharci daro uu ku sii faanayo xiligaan oo Xukuumada ay tahay Xil gaarsiin oo kaliya, balse farmaajo Waqtiga uu ka dhamaaday.
“Madaxweynaha waqtiga waxa uu ka dhammaaday marka uu ku dhawaaqay in uu yahay murashax, meel aan ku iri ma jirto & waxbaa laga sheeeg-sheega balse waad taqaaniin oo hadda kahor waan sheegay sida ruuxaanta ayuu dadka uga dhex hadlaa Madaxweynahu, xaqna uma lahan in uu sii wado howlaha Amniga & Doorashada,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Sidoo kale Dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inuu dhacayo dibad-baxa abaabulayaan musharraxiinta, islamarkaana uu qabsoomayo Sabtida.
Previous articleWararkii ugu danbeeyay ee arimaha doorashooyinka dalka
Next articlePuntland oo ku dhawaaqday in Villa Somaliya aysan shir uga qeyb galaynin, shirkana uu ka dhaco Garoonka diyaaradaha Muqdisho..
Kooxda K/cagta Manchester City oo ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska, kaddib...
Masuul horay loogu xiray u ololeynta Soomaali weyn oo...